N'ihe banyere ọrụ ebere na ihe omume, marathons bụ otu n'ime nhọrọ kachasị akara ebe ahụ. Marathon na-enye ndị na-agba ọsọ ohere igosipụta ume ha, ikike na ntinye onwe ha nye ọrụ ebere ha ma ọ bụ onye na-akwado nhọrọ na ngwaahịa marathon. Onweghi ihe ...GỤKWUO »
Gịnị bụ Akwa Nchedo Anyanwụ? Gịnị bụ UPF Ọgwụgwọ?
Ọ bụrụ na ị bụ onye na-arụ ọrụ n'ụsọ mmiri, na-efe mmiri ma ọ bụ mmiri mmiri, ọ ga-abụrịrị na ị na-eme mkpesa banyere ịmịkọta ihu na ihu igwe n'oge ọ bụla ị gbanwere. A sị ka e kwuwe, a na-atụ aro ka ị tinyeghachi sunscreen kwa awa abụọ ma ọ bụ karịa - ọkachasị ma ọ bụrụ na ị na-ehicha ahụ, swimmi ...GỤKWUO »
Gịnị bụ triblend ákwà? Gịnị mere o ji ewu ewu nke ukwuu?
Gini mere uwe elu triblend t ji dị mma? Mgbe onye ahịa m na-achọ ndụmọdụ maka ịhọrọ ihe a ga-eji na-eme uwe elu mgbe niile, amaara m nke ọma ịkwado ya. Ọ bụrụ na ị jụọ m ihe kpatara ya, m ga-agwa gị na ihe egwuregwu atọ bụ ihe dị nro ị ga-emetụ. Dị ka ị nwere ike iche ...GỤKWUO »